Kibirka iyo Isla Weynida | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Eike Fuhrken Batista da Silva, waa hantiilihii iyo milyaneerkii reer Brazil. Hantidiisa waxa lagu qiyaasi jiray ku dhowaad 40 billion oo dollarka Maraykanka ah. Waana ninkii yidhi: “haddii hal Milyan oo dollar dhulka igaga dhacdo, lagama yaabo in aan raadiyo – wakhtina kulumiyo ee waan iska dhaafi lahaa.
Sida ay shaacisay warbaahinta Forbes ee ka faalootaa arrimaha maal-qabeenada, waxa ay tibaaxday in Batista da Silva yahay ninka siddeedaad ee ugu taajirsan dunida. Halka uu noqday ninka ugu taajirsan qaaradda Koonfurta Ameerika iyo Brazil.
Waxa uu ka ganacsan jiray macdanta, saliidda iyo dahabka. Haddaba arrinta mucjisada iyo amakaaga leh waxa ay tahay in hantiilahani hantidaas oo dhan ku lumiyay muddo dhan 18 billood. Waa uu khasaaray oo kacay – ganacsigiisi oo dhanna wuu baaba’ay.
Waxa uu ku danbeeyay muflis iyo darbi jiif waayaha dunida ay legdamayaan, ugu dambaynna jeelka ayuu galay. Waxa lagu soo eedeeyay in uu ku lug lahaa dhoofinta mukhaadarraad, bixinta laaluushyo iyo wax-is-daba-marin. Waxaana lagu xukumay soddon sannaddood oo xadhig ah.
Qisooyinka iyo sheekooyinka caanka noqday ee laga hayo milyaneerkan waxa ugu caansan: in maalin maalmaha ka mid ah isaga oo ka cunteenaya meel hudheel ah in ninkii muddalabka ahaa ku daadiyay biyo, kaddibna inta uu xanaaqay ayuu mulkiilihii hudheelka ka dalbaday in uu eryo ninkan biyaha ku daadiyay.
Wuu ka diiday mulkiilihii dalabkiisi. Haddaba waxa uu sameeyay in uu hudheelkii gebigiisiba iibsaday (si uu eryo ninkan yar ee miskiinka ah ee biyaha ku daadiyay / ﻦﻣ ﻪﺗوﺮﺒﺟ ).
Waxa uu ahaa nin aad u kibir badan oo masaakiintana ku xad-gudba. Waxa uu ahaa nin aad magaciisa iyo muuqiisaba laga cabsoon jiray.
Ayaan darradii ugu weyneyd ee soo wajahday taajirkan waxa ay noqotay – kaddib markii koox cadawgiisa kamid ahayd ay afduub u gaysteen inantii [keli] ahayd ee uu dhalay.
Da’adeedu waxa ay jirtay 14 jir. Markii la dilay inta la googooyay oo jawaan lagu soo riday ayaa gurigiisa hortiisa lasoo dhigay iyada oo meyd ah. Dushana waxa laga ga soo qoray warqad ay ku qornayd: waa abaalkaaga iyo kibirkaaga dhaxalkiisi / ﻚﺗوﺮﺒﺟ ﻦﻣ كؤاﺰﺟ اﺬﻫ
Odaygii Da Silva arrintii waxa ay ku noqotay oo ku riday tiiraanyo iyo dhako-faar – cuqdad nafsi, waalli, dhafar, ciil iyo cadho iyo walbahaar adduun ayaa ku dhammaaday. Ciilkii iyi cadhadiina – waxa u wehelisay jeel iyo xabsi daba-dheer.
Muddo markii uu xabsiga ku qaatay waa laga sii daayay bishii hore ee August/2019. Laakiin waxa uu ku danbeeyay darbi jiif wareegaya dariiqyada Rio de Janeiro.
Cid kasta oo isla weyn oo kibir badan/ﺮﺒﺠﺘﻳ و ﺮﺒﻜﺘﻳ ﻦﻣ Sidan oo kale ayuu ku danbeyn doonaa. .ا ﻰﻠﻟا ﻪﻴﻓ نﻮﻌﺟﺮﺗ ﺎﻣﻮﻳ اﻮﻘﺗاو
Tags: Kibirka iyo Isla Weynida
Next post Sidii Aan Kugu Lisay Iiguma Aadan Hambeyn
Previous post Haddii Indhuhu Yihiin Muraayadda Qalbiga, Jidhkunaa Waa Muraayadda Shucuurta